I-Jornaya isebenze: UkuJonga ukuThengisa kwiNtengiso kunye nokuziPhatha kweZinto eziKhulu zokuThengwa koBomi | Martech Zone
I-Jornaya isebenze: UkuJonga ukuThengisa kwiNtengiso kunye nokuziPhatha kweZinto eziPhambili zoBomi
NgoLwesithathu, Oktobha 7, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 7, 2020 Douglas Karr
UJornaya ngu idatha-njengenkonzo Inkampani ejonge ngaphezulu kwe-350 yezigidi zokuthenga abathengi inyanga nenyanga zisebenza kwiimarike apho abathengi batyala ixesha elininzi lokuphanda, ukuhlalutya, kunye nokuthelekisa izinto ekunokuthengwa kuzo kubomi obukhulu (MLP).
IJornaya isebenze ibonelela kuphela ekubekweni esweni kwintengiso kunye neqonga lokuqonda lokuziphatha ukuthenga ubomi Abathengisi kwizithuthi, kwimfundo, kwi-inshurensi nakubambiso.
Abathengisi ngoku banokufumana izikhombisi zokuqala zenjongo yomthengi, ngokwazi ukuba abathengi kunye nethemba labo bakwintengiso yemveliso okanye inkonzo abayinikezelayo okanye ukuba bakwindlela yokuthenga efanayo.
I-Jornaya Activate yenza ukuba abathengisi basebenzise isicwangciso-qhinga sephulo, baphucule ukuzibandakanya, kwaye bahambise amava abathengi angcono kulondolozo lwabo, ekufumaneni nasekuthengiseni iinkqubo zokuthengisa. Ngokuchonga iimpawu zokuziphatha zakuqala, abathengisi banobuchule kunye nokusebenzisana okukhuselekileyo okunyusa ukufunyanwa, ukuthengiswa okuthe kratya kunye nokugcinwa kwamaxabiso.
IJornaya iyenza njani isebenze
IJornaya inobambiswano lobunini kunye netekhnoloji egubungela amawaka eewebhusayithi zokuthenga kunye nemithombo yolwazi yokuziphatha. Isisombululo sokuSebenza sivela kwaye sihambise idatha ekhuselekileyo, ehambelana nemihla ngemihla kunye nokuqonda kwindlela yokuziphatha yabathengi esekwe e-US.
Yenza idatha idityaniswe ngokulula kwizitokhwe ezikhoyo zemartech ngeJornaya's Integration Hub. Oku kuvumela abathengisi ukuba basebenzise ukufikelela kwi-Jornaya yedatha ngokuthe ngqo kwi-CRM yabo, i-CDP, i-ESP, i-dialer, okanye naliphi na iqonga lokuthengisa elifunwayo. Sebenzisa ukudityaniswa ngaphezulu kwe-100 CRM kunye neqonga lokuthengisa kubandakanya iSalesforce, i-Eloqua, iMarketo, iHubSpot, kunye neVelocify.
Usebenza njani ngokuKhokelela kwimpumelelo
Jornaya Qalisa kunceda abathengisi baqonde apho abathengi kunye nethemba labo bakwihambo zabo zokuthenga ukuze bakwazi ukulungelelanisa olona fikelelo lufanelekileyo kunye nokubonelela ngamava abathengi. Impumelelo yomThengi kunye neNkxaso yeeTyhula zaseJornaya zikunye nomxhasi yonke inyathelo lendlela. Ukusuka kwindibaniselwano yokukhwela ebhodini ukuya kuthethwano ngezona ndlela zibalaseleyo kunye nesicwangciso-qhinga, iJornaya ikhona ukunceda ukuqhuba impumelelo eqhubekayo.
Funda ngakumbi malunga noJornaya Sebenzisa
Ikhusela njani iMfihlo yaBathengi
Imfihlo yabathengi ibaluleke kakhulu eJornaya. Sebenzisa ukudityaniswa kokuziphatha okungaziwayo, ufumane ukuqonda, kwaye ubanike kwiiphakheji zedatha ezilula kodwa ezinamandla. Isisombululo sikaJornaya sokuSebenza soze sibandakanye naluphi na ulwazi lomthengi. Akukho lwazi lubonakalayo (PII) olukhoyo, olugciniweyo, okanye ekwabelwana ngalo. Iinkqubo zeJornaya kuphela zirekhodi ezingachazwanga.
tags: uhambo lwabathengijornayaJornaya isebenzeukuthenga ubomimlp